द भ्वाइसको नतिजा पछि 'ब्याक स्टेज'का यी दृश्य हेर्नुस्, जुन टिभीमा देखिएन (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दोहा, कतार । द भ्वाइस अफ नेपालको पहिलो विजेता घोषित हुँदा सिडि विजय अधिकारीका आँखा रसिला भए। नेपालमा द भ्वाइसको फ्रन्चाइज भित्र्याएउने टिमका अगुवा एवं प्रस्तोता सुशील नेपालले भ्वाइसको विजेता घोषाणा गर्न धुर्मुस सुन्तलीलाई स्टेजमा जिम्मा सुम्पिएपछि माहोल एकाएक कौतुहलताको उत्कर्षमा पुग्यो। अगाडि दर्शकको चर्को हुटिङ सुनियो।
सुन्तलीका हातमा विजेताको नाम खामबन्दीमा थियो। उनले त्यो नामको पोको फुकाउँदा टप ४ ट्यालेन्ट्स एकअर्कामा अंकमाल गर्दै तनावमिश्रित अनुहारमा आफ्नो नाम उद्घोष हुने आकांक्षाले धड्कन थामेर उभिएका थिए। भाग्यबस त्यो नाम सिडि विजय अधिकारीको निस्क्यो। अधिकारी दुई हात उठाएर दर्शक र अगाडिका कोचतर्फ झुकेर नतमस्तक बने। उनले स्टेजलाई घुँडा टेकेर चुमे। अगाडिबाट दर्शकले अन्तिम बल लगाएर चर्को हुटिङ दिए।
शुक्रबार नेपाली समय अनुसार करिव मध्यरातमा कतारको दोहामा द भ्वाइसको विजेता घोषित गरिएको हो।
आफ्नो टिम विजयी हुँदा कोच दिप श्रेष्ठ हर्षविभोर देखिए। बसेको कुर्सीबाट उनी उठे र आफ्नो चेलाकै हाउभाउमा आफ्नो खुसीको क्षण अभिव्यक्त गरे। उनी तत्क्षण बाँकी कोचबाट घेरिए र बधाईको अंकमालमा गाँसिए।
यसरी नेपालको चर्चित टिभी रियालिटी शो द भ्वाइस अफ नेपालको पहिलो संस्करणले पूर्णविराम लिएको छ।
त्यसपछि मञ्चमा के भयो? टिभिमा लाइभ चलिरहेको दृश्यमा पर्दा पछाडीका रोचक पलहरू देखिएनन्, जुन यो भिडियोमा उतारिएको छ।
हेर्नुस् विजेता घोषित भएपछि द भ्वाइसको 'ब्याक स्टेज'मा के भयो?